Allgedo.com » Barta Twitter-ka Al-Shabaab oo La Xanibay.
Barta Twitter-ka Al-Shabaab oo La Xanibay.
Print here| By: allgedo.com: Friday, January 25, 2013 // Jawaabaha waa la xiray
Boggii Twitter-ka ee Ururka Al-Shabaab ayaa si rasmi ah loo xanibay ka dib muddo sanad ah oo bartaas ay baahin jirtay wararka iyo bayaanaadka Afka English-ka ee Al-shabaabka Soomaaliya ka soo baxa.
Ilo wareed muhiim ah oo ka tirsan Maktabka Iclaamka ee XSHM ayaa xaqiijiyay in la xannibay account-koodii Twitter-ka, waxaana ay sheegeen in muddooyinkii u danbeeyay ay jireen cadaadisyo lagu saarayay shirkadda Twitter iney xirto boggaasi.
Barta Twitter-ka oo ka mid ah hababka cusub ee Warbaahinta casrigan ee loo yaqaano Microblogging ayaa isu keeneysay dhinacyada siyaasadaha kala duwan ee Caalamiga, waxaana Al-shababka Soomaaliya ay u adeegsan jireen bartaasi baahinta bayaanaadka iyo wararka inta badan ku wajahan dawladaha reer galbeedka ee qeybta weyn ku leh xaaladaha isdiidan ee dalka Soomaaliya.
Bogga Twitter-ka ee @HSMPress ayaa si rasmi ah loo diiwaan geliyay bishii December ee sanaddii 2011 iyadoona wixii markaasi ka danbeeyay ay ku xirmeen kumanaan dad ah oo ay ku jiraan shirkadaha warbaahinada Caalamiga, wariyeyaasha Caalamiga ah iyo dawladaha qaarkood,iyadoo sidoo kale lagala socday mar waliba bayaanada Al-shabab ka soo baxa.
Lama shaacin sababta dhabta ah ka danbeysa in la xanibo Barta Twiterka Al-shabaab,waxaana la sheegay in warbixinada lagu daabacayay Bogga si weyn ay ugu dhib qabeen wadamada reer galbeedka,maadama la sheegay in boga lagu soo bandhigayau xaqiiqda jirta.
Barta Twitter-ka ee @HSMPress ayaa dagaalkeedii ugu horeeyay la gashay dawladda Kenya iyo Afhayeenkoodii ee Major Chirchir, iyadoona Al-shabaab sheegay in halkaasi ay ka soo hooyeen guulo la taaban karo.
Waxaa muuqanaya haddii hadda ay xireen User-kaasi in wali Al-shabaab ay furan karaan mid cusub isla markaana ay sii wadi karaan xiriirka Caalamka.
Al-shabaab ayaa si weyn waxay hardan ugu dhaxeeya marka laga soo tago dowlada Soomaaliya oo siyaasadooda isdiidan tahay,wadamada reer galbeedka oo hadalo aan u cuntamin u marin jiray barta Twiterka.
Cabdi Faarax, Muqdisho/Soomaaliya.